Sida loo Beddelaan VLC in MP3
Sida loo Beddelaan VLC in MP3?
Ciyaaryahanka VLC ma aha ciyaaryahan video Diintooda laakiin ay sameyn kartaa waxyaabo dheeraad ah oo aad u badan. Haddii aad la isticmaalayo VLC in kaliya ciyaari videos, ogaada in aad wax badan oo dhan in ka badan samayn karo. Waayo, mid, sidoo kale waxa aad isticmaali karto sidii Converter ah. Haddii aad raadinayso si loogu badalo VLC files taageeray in mp3 , oo aad samayn kartaa fudayd isticmaalaya hage soo socda.
Qeybta 1: On Windows
Qeybta 2: Wixii Mac
Qeybta 3: Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate
Ka hor maraya tallaabooyinkan, hubi in version daaqadaha VLC taageertaa faylka aad rabto in aad si loogu badalo.
Tallaabada 1. Daahfurka VLC Media Player oo guji diinta / badbaadiyo.
Step2. Hadda riix badhanka Add on in aad ku darto files in aad rabto in aad si loogu badalo galay mp3. Haddaba tag Beddelaan / Save.
Step3. Waa inaad ku qor magaca file iyo caga of file wax soo saarka. Si kastaba ha ahaatee, in la hubiyo in magaca faylka isha waa isku mid aad rabto in aad si loogu badalo. Under goobaha ay doortaan profile of file wax soo saarka. Si kastaba ha ahaatee, profile waa in ay ahaadaan mp3, si Tag profile edit ah.
Step4. Under encapsulation regelingen la xusho oo haatan bal taga Audio tab codec. Ka dhig MP3 ee codec. Dooro bitrate ku haboon oo guji mooyee. Haddaba tag si ay u bilaabaan, si ay u bilaabaan beddelidda ee faylka.
Step5. Horumarka waxaa lagu soo bandhigi doonaa, waayo, waxaad si ay ula socdaan. Waqtiga ku xiran tahay tirada faylka.
YYou isticmaali kartaa VLC aad Mac sidoo. Hubi Mac version uu yahay mid casriyeeysan oo taageera qaabka aad rabto in aad si loogu badalo.
Tallaabada 1. Dooro file aad rabto inuu u ciyaaro. Midig u guji waxaa ku abuurtaan iyo faylka la VLC aad Mac. Tag File Tab, oo guji Beeralay / Stream.
Tallaabada 2. Haddaba tag si loogu badalo / Save.
Tallaabada 3. shaashadda soo socda, waxaad u baahan doontaa inaad ku qor magaca iyo caga of file wax soo saarka. Hubi in dheeraad ah ee file waa MP3. Button caleenta Isticmaal tahay doorashada u socoto wax soo saarka. Under dejinta tagaan si ay edit profile haddii MP3 waa profile aan la soo xulay default.
Tallaabada 4. First Dooro tab Profile dooro hoos regelingen iyo hoos codec Audio MP3 dooro kulankii codec.
Tallaabada 5. Hubi in aad u astaysto u bitrate saxda ah. Kiro heerka xoogaa ah, sare u noqon doonaa baaxadda file wax soo saarka. Ka dhig goobaha kale sida ay tahay. Hadda, guji codso in ay dib ugu.
Tallaabada 6 - Dooro meel adigoo Save sida File iyo aad u wanaagsan si ay u tagaan.
Tallaabada 7. Waxaad ka eegi kartaa xaaladda diinta ku interface ugu weyn. Mar haddii aad dhameyso file la doonayo ee caga file saarka doortay waxaad ka heli kartaa.
Haddii aad raadinayso hab fudud ka soo baxay si loogu badalo files iyo videos aad, raadi software ah oo lagu kalsoonaan karo sida Wondershare Video Converter Ultimate .
Waxa ugu muhiimsan ee labada xaaladood waa in VLC version ku saabsan nidaamka waa mid lagu taageerayo qaab faylasha aad rabto in aad si loogu badalo galay MP3. Si kastaba ha ahaatee, haddii file waa qaab leheyn aad mar walba isticmaali kartaa Wondershare Video convertor Ultimate, taas oo Converter awood leh oo badasha file 30 jeer ka dhakhsi badan VLC.
> Resource > MP3 > Sida loo Beddelaan VLC in MP3?